SQL Server Qalabka Soo kabashada. SQL Server Dayactirka Software. Qalabka Dayactirka ee MDF.
DataNumen SQL Recovery waa ugu fiican SQL Server qalab kabashada adduunka. Waxay hagaajin kartaa faylasha keydka xogta ee MDF ee musuqmaasuqa ama waxyeellada soo gaadhay waxayna soo kaban kartaa inta ugu badan ee xogtaada ah ee suurtogalka ah, taas oo yareynaysa khasaaraha ku yimid musuqmaasuqa faylka.
4.90 / 5 (laga bilaabo 1,614 cod)
maxaad DataNumen SQL Recovery?
Heerka soo-kabashada waa most shuruudaha muhiimka ah ee soo-kabashada SQL. Iyada oo ku saleysan tijaabooyinkayaga dhameystiran, DataNumen SQL Recovery leeyahay heerka ugu wanaagsan ee soo kabashada, aad uga fiican tartamayaasha kale ee suuqa ku jira!
Baro wax badan oo ku saabsan sida DataNumen SQL Recovery sigaar cabaya tartanka
Si fudud wax ku ool ah, oo macnaheedu yahay cajiib. Aad baad u mahadsan tahay, gaar ahaan maxaa yeelay haddii kale waxaan awoodi kari waayey inaan jidh ahaan u helo faylasha aan ku khasbanaaday
Subax wanaagsan. Waxaan tijaabinayaa softiweerkaaga si aan u dayactiro sql database. Ka dib markii aad wadatid qalabkaaga hadda waxaan awoodaa inaan arko dhammaan xogtayda mar labaad :)
Maamulaha guud & aasaasaha Hey Flyer
Xalka Raacaya Khaladaadka Caadiga ah iyo Dhibaatooyinka ku jira SQL Server MDF Faylka
xxx.mdf Ma aha Faylka Xogta Aasaasiga ah
xxx.mdf Maahan Madaxa Diiwaan Galinta Database
Sql Server La Ogaaday Khalad I / O ah oo Ku-saleysan Caqli-gal: Checksum aan sax ahayn
Sql Server La Ogaaday Khalad I / O ah oo ku-saleysan caqli-gal: Bogga Torn
Soo Celinta Tirtir Diiwaanada ama Jadwalka keydka macluumaadka
Noocyada Muhiimka ah ee DataNumen SQL Recovery v6.0
Taageerada SQL Server 2005, 2008, 2008 R2, 2012, 2014, 2016, 2017, 2019.
Taageero dib u soo kabashada qaabdhismeedka iyo xogta jadwalka ku jirta.
Taageero inuu ka soo kabto dhammaan noocyada xogta, oo ay ku jiraan nooca XML.
Taageero soo kabashada tiirarka dhifka ah.
Taageero inuu ka soo kabto diiwaanada la tirtiray.
Taageero soo kabashada tusmada iyo furayaasha aasaasiga ah.
Taageero soo kabashada aragtiyaha, kiciyayaasha, xeerarka iyo awaamiirta.
Taageerada dib u soo kabashada habraacyada la keydiyay, shaqooyinka miisaanka, shaqooyinka miiska lagu qiimeeyo iyo shaqooyinka miiska lagu qiimeeyo ee kaladuwan.
Taageero si aad u soo kabato oo aad uqeexdo walxaha sirta ah.
Taageer inuu ka soo kabsado faylal badan, oo ay ku jiraan faylka MDF iyo faylalka la xidhiidha NDF.
Taageero si loo soo saaro xogta la soo kabsaday ee faylka MDF.
Taageero si looga soo kabsado xogta MDF / NDF ee faylasha VMWare VMDK (Virtual Machine Disk) oo aan waxyeelo soo gaarin (*. Vmdk), Virtual PC VHD (Virtual Hard Disk) files (*. Vhd), Acronis True Image files (*. Tib), Norton Ghost faylasha (*. gho, * .v2i), Windows NTBackup faylasha (*.bkf), Faylasha sawirka ISO (*. Iso) iyo faylasha sawirka Nero (*. Nrg).
Taageero soo kabasho SQL Server xogta laga helo temrary tempdb.mdf faylka.
Taageero si loo soo kabsado MDF iyo NDF faylasha sida ugu weyn ee 16TB.
Taageero lagu dayactirayo faylasha MDF ee ku saabsan warbaahinta la musuqmaasuqay, sida diskiga diskiga, Zip saxannada, CDROM-yada, iwm.
Taageero si loo dayactiro qayb ka mid ah faylasha MDF.
Ku dhexjiray qolofka Windows, markaa waxaad ku hagaajin kartaa feylka MDF oo leh macnaha guud (guji midig) menu ee Windows Explorer si fudud.
Isticmaalka DataNumen SQL Recovery inuu ka soo kabsado Musuqmaasuq SQL Server Macluumaadka
Marka aad SQL Server Faylasha MDF-du waa kuwo khariban ama waxyeello soo gaadhay oo si caadi ah uma furi kartid, waad isticmaali kartaa DataNumen SQL Recovery si loo baaro feylasha MDF loona soo ceshto xogta inta ugu macquulsan.
Fiiro gaar ah: Kahor intaadan soo kaban wixii faylal MDF ah oo musuq ama waxyeeloobay DataNumen SQL Recovery, fadlan xir barnaamij kasta oo kale oo wax ka beddeli kara faylasha MDF.
Xulo feylka MDF ee musuqmaasuqa ama waxyeellada gaadhay si loo hagaajiyo.
Waxaad si toos ah ugu soo dari kartaa magaca faylka MDF ama dhagsii badhanka si aad u caleenta u xulato feylka. Waxa kale oo aad riixi kartaa badhanka si aad u hesho feylka MDF si loogu hagaajiyo kombiyuutarka deegaanka.
Haddii ay jiraan hal ama dhowr faylal ah oo NDF ah oo la xiriira faylka MDF ee waxyeellada gaadhay, markaa waad ku dari kartaa sidoo kale:
Haddii aad ogtahay qaabka isha ay waxyeellada ka soo gaadhay MDF, markaa waad cayimi kartaa:
Haddii aadan cayimin qaabka, ka dib marka loo eego, DataNumen SQL Recovery wuxuu isku dayi doonaa inuu falanqeeyo ilaha MDF faylka isla markaana uu si toos ah u go'aamiyo qaabka.
Marka la eego, DataNumen SQL Recovery wuxuu keydin doonaa feylka MDF ee go'an fayl cusub oo lagu magacaabo xxxx_fixed.mdf, halkaasoo xxxx uu yahay magaca isha faylka MDF. Tusaale ahaan, ilaha MDF faylkiisa Damaged.mdf, magaca asalka ah ee faylka go'an wuxuu noqonayaa Damaged_fixed.mdf. Haddii aad rabto inaad isticmaasho magac kale, markaa fadlan dooro ama u dhig si waafaqsan:
Kadib nidaamka soo kabashada, waadtart SQL Server Maareynta Studio iyo marin u hel xogta keydsan ee u dhiganta.
Click ah badhanka, DataNumen SQL Recovery waxay keeneysaa "Ku xir SQL Server"sanduuqa wada hadalka, sida hoos ku qoran:
Waxaad u baahan tahay inaad dejiso Magaca Server iyo HUBINTA waayo, SQL Server tusaale kombuyuutarka deegaanka ama kan fog, ka dib riix batoonka "OK". Kadib DataNumen SQL Recovery doonaa start iskaanka iyo hagaajinta ilaha MDF faylka. Bar horumarka
Nidaamka soo kabashada kadib, haddii faylka MDF asalka si guul leh loogu soo kaban karo, waxaad arki doontaa sanduuqa farriinta sidan oo kale:
Hada waxaad tahaytart SQL Server Maareynta Studio iyo marin u hel xogta ku jirta keydka xogta ee MDF.
Taageero si loo xasuusto goobaha isku xirnaanta.
Taageero soo kabashada furayaasha aasaasiga ah
Taageero si loo soo ceshado hantida tirtirmay ee khaanadda.
DataNumen SQL Recovery 5.9 waxaa la sii daayay 3-da Maajo, 2021
DataNumen SQL Recovery 5.4 waxaa la sii daayay Diseembar 15, 2020
DataNumen SQL Recovery 5.2 waxaa la sii daayay Nofeembar 2, 2020
DataNumen SQL Recovery 5.1 waxaa la sii daayay Luulyo 11th, 2020
Taageerada SQL Server 2019.
DataNumen SQL Recovery 5.0 waxaa la sii daayay Juun 5th, 2020
Tirtir waxyaabaha aan waxtarka lahayn.
DataNumen SQL Recovery 4.5 waxaa la sii daayay Abriil 25, 2020
DataNumen SQL Recovery 4.4 waxaa la sii daayay Maarso 9th, 2020
Taageero soo kabashada xogta XML.
DataNumen SQL Recovery 4.3 waxaa la sii daayay Diseembar 31, 2019
DataNumen SQL Recovery 4.2 waxaa la sii daayay Sebtember 8th, 2019
DataNumen SQL Recovery 4.1 waxaa la sii daayay Abriil 11, 2019
DataNumen SQL Recovery 4.0 waxaa la sii daayay Diseembar 8, 2018
DataNumen SQL Recovery 3.2 waxaa la sii daayay Oktoobar 10th, 2018
Taageero soo kabashada tusmada.
DataNumen SQL Recovery 3.0 waxaa la sii daayay Ogosto 15th, 2018
Hagaajinta waxqabadka ka shaqeynta xogta weyn.
Yaree isticmaalka xusuusta markaad ka baaraandegayso xog aad u tiro badan.
DataNumen SQL Recovery 2.8 waxaa la sii daayay Maarso 6th, 2018
Taageerada SQL Server 2017
DataNumen SQL Recovery 2.7 waxaa la sii daayay Maarso 26th, 2017
Taageerada SQL Server 2016.
DataNumen SQL Recovery 2.6 waxaa la sii daayay Febraayo 3, 2017
Taageero si loo saxo khaladaadka keydka badan.
DataNumen SQL Recovery 2.5 waxaa la sii daayay Febraayo 12th, 2016
DataNumen SQL Recovery 2.4 waxaa la sii daayay Oktoobar 1, 2014
DataNumen SQL Recovery 2.3 waxaa la sii daayay May 12, 2014
Taageero ka soo kabashada xogta MDF / NDF ee faylasha VMWare VMDK (Virtual Machine Disk) oo aan waxyeelo gaarin (* .vmdk), Virtual PC VHD (Virtual Hard Disk) files (* .vhd), Acronis True Image files (* .tib), Norton Ghost faylasha (* .gho, * .v2i), Windows NTBackup faylasha (*.bkf), Faylasha sawirka ISO (* .iso) iyo faylasha sawirka Nero (* .nrg).
DataNumen SQL Recovery 2.2 waxaa la sii daayay Maarso 18, 2014
DataNumen SQL Recovery 2.1 waxaa la sii daayay Janaayo 9, 2014
Taageerada SQL Server 2014.
DataNumen SQL Recovery 2.0 waxaa la sii daayaa 7da Diseembar, 2013
DataNumen SQL Recovery 1.1 waxaa la sii daayay 3 Ogosto, 2013
Taageerida faylka wax soo saar ee qaab MDF ah.
DataNumen SQL Recovery 1.0 waxaa la sii daayay May 11, 2013
Taageerada SQL Server 2005, 2008, 2008 R2, 2012.
Taageero si loo soo celiyo dhammaan noocyada xogta, marka laga reebo nooca XML.
Suite kabashada xogta, oo ay kujiraan aaladaha soo kabashada ee keydinta xogta Microsoft Access musuqmaasuq iyo DBF database.
Kasoo kabasho musuqmaasuq Oracle DBF faylasha keydka
Dayactir musuqmaasuq dBase, FoxBase, FoxPro iyo Visual FoxPro DBF files.